I-Cork Yoga Mat
I-Yoga Belt / Ibhande
Ukweqa umata wezintambo
Ezemidlalo Igoli Net
Umbukiso / Imicimbi
"Ukulawulwa okubili kokusetshenziswa kwamandla" kwenqubomgomo kahulumeni wase-China
Unjani kulezi zinsuku ?? Ngiyethemba konke kuzohamba kahle.
Mhlawumbe uqaphele ukuthi inqubomgomo yakamuva "yokulawula ukusetshenziswa kwamandla" kahulumeni wase-China ibe nomthelela othile kumandla wokukhiqiza wezinkampani ezithile zokukhiqiza, futhi ukulethwa kwama-oda kwezinye izimboni kufanele kubambezeleke, kunjalo i-yoga yethu izinto nezinto zezemidlalo nazo zingathinteka ezingeni elithile.
Ngaphezu kwalokho, uMnyango Wezemvelo Nezemvelo waseChina ukhiphe uhlaka lwe- “2021-2022 Autumn and Winter Action Plan for Management Pollution Management” ngoSepthemba. Lokhu ekwindla nasebusika (kusuka ngo-Okthoba 1, 2021 kuya kuMashi 31, 2022),
amandla wokukhiqiza kwezinye izimboni angavinjelwa kakhulu.
Ukunciphisa umthelela wale mikhawulo, thina boJointop sincoma impela ukuthi ubeke ama-oda akho nge-yoga mat, ibhulokhi ye-yoga, ibhendi lokumelana, ibhola le-yoga, amasokisi e-yoga, isondo le-yoga, indandatho ye-pilaties, i-smart hula hoop noma enye i-oda lezesekeli zemidlalo ngokushesha kungenzeka.
Ngakho-ke singalungisa izinto kusengaphambili futhi sihlele ukukhiqizwa kwe-yoga nezinye izinto ze-yoga kusengaphambili ukuqinisekisa ukuthi i-oda lakho lingalethwa ngesikhathi sokunciphisa ukulahleka okungenzeka okungenasidingo, ngicabanga ukuthi manje kuyindlela engcono kakhulu yokuvikela ibhizinisi lakho futhi ulondoloze izindleko kwakho.
Ungase futhi uqaphele ukuthi okwamanje kusho ukushoda kwemikhiqizo emhlabeni wonke kanye nezimfuno ezinkulu zemakethe, sinethemba lokuthi singasebenza kangcono futhi sisondelene ndawonye ukuthola leli thuba, ithemba lingangena ebudlelwaneni bebhizinisi besikhathi eside. Ngakho-ke siphakamisa ukuthi ubeke ama-oda alenyanga ngoba lesi simo singadala ukubambezeleka kwezinyanga ezi-3-6 kunakuqala, uthini umbono wakho?
Uma uneminye imibuzo sicela ukhululeke ukuxhumana ne-Jointop nganoma yisiphi isikhathi!
Sicela unakekele kule nkathi ekhethekile nazo zonke izibusiso kuwe nakwakho.
No.18, Baihuazhou Road, Pushang Area Area, JinShan, FuZhou City, FuJian Province, China, 350008
Ifoni / WhatsApp / WeChat:
Ucingo: + 86-591-87668070
I-Non Slip Yoga Mat, uPu Yoga Mat , uNbr Yoga Mat , PVC Yoga Mat, TPE Yoga Mat, Mens Headband ,
Amathiphu - Imikhiqizo Zezıhlabane - Ibalazwe - AMP Hambayo